सर्वोच्चको फैसलाप्रति कार्की भन्छन्- बच्चा जन्मिएपछि विवाह पद्धति मिलेन भन्यो, अब त्यो नानीको के हुन्छ ?
कांग्रेसले पनि नाराबाजी गर्दै गर्‍यो संसद्‌मा बेल घेराउ
प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू (लाइभ)
केपी ओलीले बोलाए आकस्मिक संसदीय दलको बैठक
मुम्बई । साउथ इन्डियन सुपर स्टार प्रभासको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘राधे श्याम’ टिमले प्रणय दिवसको अवसरमा चलचित्रको रिलिज मितिसहितको टिजर सार्वजनिक गरेको छ ।
सन् २०१८ मा चलचित्र निर्माणको घोषणा गरिएको यस चलचित्रको रिलिज मितिका लागि दर्शक निकै प्रतीक्षारत थिए । अन्तत: निर्माण टिमले यो लामो प्रतीक्षालाई तोड्दै १४ चलचित्र यहि जुलाई ३० मा रिलिज हुने घोषणा गरेका छन् ।
चलचित्रका मुख्य कलाकार प्रभास आफैंले पनि इन्स्टाग्राममार्फत चलचित्रको टिजर सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् । भिडियो सेयर गर्दै प्रभासले क्याप्सनमा मायाको दिन आरएसको झलक हेरेर मनाऔं भन्दै लेखेका छन् ।
सार्वजनिक टिजरमा प्रभास र पूजाको रोमान्टिक केमेस्ट्री देख्न सकिन्छ । चलचित्र हिन्दी, तेलुगुलगायत चार विभिन्न भाषामा विश्वभरि एकैसाथ रिलिज हुँदै छ । राधा कृष्ण कुमार निर्देशित/लिखित ‘राधे श्याम’ मा प्रभास र पूजा हेग्डेको मुख्य भूमिका छ ।
मुम्बई । कोरोना महामारीकालमा धेरै चलचित्रमा डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज भए । तर, स्थिति सामान्य हुन थालेसँगै निर्माताहरु पुनः हल रिलिजतर्फ... ६ घण्टा पहिले
जनकपुरधाम । जनकपुर साहित्य महोत्सव शनिबार सकिएको छ । अन्तिम दिनको पहिलो सत्रमा 'कसले देला सुशासन ?' विषयमा बहस गरियो ।... २२ घण्टा पहिले